Забур 96 CARS - Nnwom 96 ASCB
1Monto dwom foforɔ mma Awurade;
2Monto dwom mma Awurade, na monkamfo ne din;
mompae mu nka ne nkwagyeɛ no daa daa.
3Monka nʼanimuonyam wɔ amanaman mu,
monka nʼanwanwadeɛ a wayɛ wɔ nnipa mu.
4Awurade yɛ kɛseɛ na ɔfata ayɛyie;
5Anyame a wɔwɔ aman foforɔ so yɛ ahoni bi kwa,
6Animuonyam ne kɛseyɛ wɔ nʼanim;
ahoɔden ne animuonyam wɔ ne kronkronbea hɔ.
7Momfa mma Awurade, Ao amanaman mmusuakuo,
8Momfa animuonyam ne din a ɛfata mma Awurade;
momfa afɔrebɔdeɛ nhyɛne nʼadihɔ hɔ.
10Monka nkyerɛ aman nyinaa sɛ, “Awurade di ɔhene.”
Wɔabɔ asase atim hɔ pintinn na ɛnhinhim;
ɔde pɛpɛyɛ bɛbu nnipa atɛn.
11Momma ɔsorosoro ani nnye, na asase nni ahurisie;
momma ɛpo ne emu nneɛma nyinaa nworo;
12momma mfuo ne so nneɛma nyinaa mmɔ ose.
Nnua a ɛwɔ kwaeɛm de ahosɛpɛ bɛto dwom;
13wɔbɛto dwom wɔ Awurade anim, ɛfiri sɛ ɔreba,
ɔreba abɛbu asase no atɛn.
na woabu nnipa nso atɛn wɔ ne nokorɛ mu.
ASCB : Nnwom 96